I-Adobe Creative Cloud Yabafundi - Thatha Isaphulelo Esikhethekile - Amakhuphoni
I-Adobe ingelinye lamathuluzi amakhulu okuklama nokukhiqiza kubadali abakule mboni. Basiza ukukhipha ubuhlakani bakho. Iningi labafundi abavela emikhakheni ehlukene lisebenzisa le nsizakalo. Manje ungajabulela izinzuzo ze-premium ngesaphulelo somfundi se-Adobe Creative Cloud. Kulo mhlahlandlela, sizokukhombisa ukuthi ungakusebenzisa kanjani ngokugcwele kule nsizakalo.
Ingabe i-Adobe Inesaphulelo Somfundi?
Izaphulelo zabafundi ze-Adobe ziyisidingo kulabo abanethemba lokonga imali. Abasebenzisi bangathola intengo ephansi lapho bhalisa nge-akhawunti yezemfundo. Izitshudeni zingonga ngaphezu kwe-60% ngokuthenga kwazo. Iyatholakala futhi kothisha.Uzothola izinhlelo zokusebenza ezingama-20 + ngalokhu kuthenga. Izindleko eziphezulu ziyi- $ 19.99 ngenyanga.
Okunye Ukunikezwa Kwabafundi Ongakuthanda:
Xfinity Student Isaphulelo
Izinyathelo Zokuthola I-Adobe Cloud Cloud Ngesephulelo:
Inqubo yokuthola isaphulelo sabafundi ilula impela. Abasebenzisi bangabhalisela ngokushesha i-akhawunti yesitshudeni. Sizokhuluma ngezinyathelo zokukusiza. Balandele, futhi ungaqala ukusebenzisa izinsiza maduzane.
Abasebenzisi kufanele bavakashele i-Adobe iwebhusayithi yamafu yokudala ukuze babhalise. Ungabona okulandelayo isixhumanisi .Kuzokusa ekhasini lezaphulelo zabafundi. Lapha ungathola amadili akhangayo. Chofoza kunkinobho yokuthenga manje ukuqala.
Abasebenzisi kufanele benze i-akhawunti kuwebhusayithi. Isinyathelo sokuqala ukufaka ikheli lakho le-imeyili.Abafundi bangafaka i-ID yabo ye-imeyili .edu. Lokhu singakusebenzisa ukuqinisekisa ukuthi inqubo ihamba kahle. Abasebenzisi bangasebenzisa amanye ama-akhawunti we-imeyili. Akukho okuphoqelelwe kuwebhusayithi.
Ungenza inkokhelo kuwebhusayithi yabo ukuqala ngokushesha ukubhalisa kwakho. Ipulatifomu ikuvumela ukuthi ukhokhe ngamakhadi wesikweletu kanye ne-Paypal. Kuya ngesifunda sakho. Kukhona ukusekelwa kwezinketho zendawo zokukhokha.
Isinyathelo sokugcina ukuqinisekisa isimo sakho somfundi. Abasebenzisi bangabelana nge-ID yabo yesikole noma yasekolishi.Inqubo iphephe ngokuphelele kuwe. Wonke umuntu ofanelekayo angabhalisa ngale nqubo. Izinyathelo zokuqinisekisa ziqonde ngqo. Kungaba nokuqinisekisa okusheshayo nge-automation etholakalayo kulezi zinsuku.
Kuyamangalisa! Manje usungaqala ngokushesha ukujabulela izici ze-premium ngezindleko ezingabizi.
Izici ze-Adobe Creative Cloud:
Isaphulelo somfundi we-Adobe sikulethela ezinye izici ze-premium. Ilungele labo abadinga izinhlelo zokusebenza zamaphrojekthi abalulekile. Ukuhanjiswa kuyimfuneko ejwayelekile emakolishi nasezikoleni. Nazi izinzuzo zokuthenga uhlelo lwabafundi be-Adobe.
1. Finyelela kuzo zonke izinhlelo zokusebenza ze-Adobe
Abakwa-Adobe bakunikeza okubhaliselwe kwe-premium kuzo zonke izinhlelo zabo zokusebenza. Kufaka konke kusuka kusithombe, ividiyo, amathuluzi wokudala imidiya yokuxhumana nabantu. Abasebenzisi futhi bathola ukufinyelela kuthuluzi le-Adobe Acrobat. Isifundi se-PDF silungele ukudala nokuhlela amadokhumenti. Jabulela i-Photoshop, i-Premiere Pro, i-Spark AR, nezinye eziningi.
2. Bukela ufunde
Abasebenzisi bangajabulela iwashi futhi bafunde inqubo. Ilungele abafundi abafuna ukuthuthukisa amakhono abo. Abakwa-Adobe bakunikeza amandla okuqinisekisa ukuthi ungafunda ngokusebenzisa isoftware yabo. Ubuchwepheshe buqhubeka njalo. Kuhlale kungcono ukuhlala ezinzwaneni zakho.
3. Izifanekiso zamahhala ne-Adobe stock
I-Adobe futhi inika abasebenzisi ithuba lokuzama amakhono abo ngezifanekiso. Kukunika umfutho wokuthuthukisa ukwakheka kwakho nokuqukethwe. Ukwakha ukubukwa okuphefumulayo nsuku zonke kungaba yinselele. Iyenza lula inqubo kancane kubafundi. Insizakalo yesitoko i-Adobe nayo iyisengezo esamukelekile.
Lezi yizici ezinhle eziza nezinhlelo ze-Adobe Creative Cloud Student.
Kulo mhlahlandlela, sisho zonke izinyathelo nezici ezidingekayo okufanele wazi. Siyethemba ukuthi lokhu kuqinisekisa ukuthi ungathatha isinqumo esizwakalayo. Qala ukudala ukubonakala okumangalisa kumadivayisi akho.
U-Vitali Klitschko Net Worth – Iminyaka, Umsebenzi, Impilo Yasebancane nokuningi!
Kwesobunxele 4 Dead 3 - Amahemuhemu Futhi Esikwaziyo Kuze kube manje